वजयी घरदैलोको चटारोमा मेयर रेणु, भन्छिन् ः जनताको योजना बुझेर कामलाई तीव्रता दिन्छु – MeroJilla.com
माइतीघर मण्डला र जुम्ला घटनामा सरकारबाट ज्यादती भयो : देउवा
कलााकार सुदिप क्षेत्री वैवाहिक बन्धनमा पहिलो यात्रा रेलमा पक्का
नारायणकाजी-गिरिराजमणि गोविन्द केसीको पक्षमा, ओली–प्रचण्डलाई तनाब
वजयी घरदैलोको चटारोमा मेयर रेणु, भन्छिन् ः जनताको योजना बुझेर कामलाई तीव्रता दिन्छु
जनतासंग भोट मागियो, जनताले भोट दिएर जिताए, त्यसैले अहिले विजयी ¥र्यालीसंगै घरदैलोमा गएर जनतासंग समस्या पनि बुझ्ने गरेको छु’—रेणुले भनिन् । धन्यवाद मात्र होईन् अब कुन विकास पहिला र कसरी भन्ने बारेमा सुझाव समेत लिएको छु ।
माइतीघर मण्डला र जुम्ला घटनामा सरकारबाट ज्यादती भयो : देउवा	Thursday, July 19th, 2018
नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकारविरुद्ध देशब्यापी आन्दोलनको घोषणा	Tuesday, July 17th, 2018
डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आए July 19, 2018
जुम्लामा डा. केसीका समर्थकअस्पतालमै पिटीए July 19, 2018
डा. गोविन्द केसीलाई लिन हेलिकोप्टर जुम्लामा, अपहरण शैलीमा नलैजान केसीको चेतावनी July 19, 2018
डा. केसी लिन जुम्ला पुग्यो हेलिकोप्टर, समर्थकको अवरोध July 19, 2018
कालीगण्डकी एकेडेमी कुश्माले एसइई परिक्षा ०७४ का विद्यार्थीहरुलाई सम्मान र बधाई तथा विदाई ग¥यो July 19, 2018